Ihe ise kpatara 5 onye ọbịa bịara na peeji gị | Martech Zone
Ihe 5 Mere Onye ọbịa ji bịarute na ibe gị
Tuesday, October 13, 2020 Tuesday, October 13, 2020 Douglas Karr
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta weebụsaịtị, profaịlụ mmekọrịta, ma ọ bụ ibe ọdịda na-enweghị nghọta ebumnuche nke ọbịa. Ndị njikwa ngwaahịa na-arụ ọrụ ngalaba ahịa ka ha depụta atụmatụ. Ndị isi na-amanye ngalaba azụmaahịa ka ha bipụta nnweta ọhụụ. Ndị otu na-ere ahịa na-arụ ọrụ ngalaba ahịa ka ha kwalite onyinye na ụzọ mbanye.
Ihe ndị ahụ bụ mkpali dị n'ime ka ị na-achọ ịmepụta saịtị weebụ ma ọ bụ ihu ọdịda. Mgbe anyị chepụta na ịzụlite a web ọnụnọ maka a ụlọ ọrụ, ozugbo pushback anyị na-ahụkarị… ihe niile na efu. Mgbe ụfọdụ ọ bụ atụmatụ weebụ nke ahụ na-efu, mana ọtụtụ oge ọ bụ eziokwu doro anya banyere ụlọ ọrụ ahụ.
Ana m arụ ọrụ na ọzụzụ ụlọ ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ ọha na eze nwere ọtụtụ narị ndị enyemaka ma gwa m ka m mee ngosi na akụkụ nke ibe weebụ ma ọ bụ ihu ọdịda. Gwa eziokwu, peeji ọ bụla nke weebụsaịtị gị bụ peeji nke ọdịda. Ọbịbịa ọ bụla nọ ebe ahụ nwere ụdị ebumnuche. Ihe kachasị mkpa na ibe weebụ na-achọpụta na ị na-enye onye ọbịa ahụ ụzọ!
Mgbe anyị na-emepụta saịtị, profaịlụ, na peeji nke ọdịda maka ụlọ ọrụ, otu iwu m ga-echetara ha bụ nke a ::
Anyị emepụtaghị ma wuo weebụsaịtị maka ụlọ ọrụ gị, anyị chepụtara ma wuo ya maka ndị ọbịa gị.
Gịnị bụ ebumnobi onye ọbịa gị?
Enwere 5 bụ isi ihe kpatara na onye ọbịa ọ bụla na-abịa na saịtị gị, profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ ibe ọdịda. Nke ahụ bụ ya… naanị 5:
Research - imirikiti ndị mmadụ na-abata na ibe weebụ na-eme nyocha. Ha nwere ike na-enyocha nsogbu dị n'ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ n'ụlọ ha. Ha nwere ike na-enyocha nsogbu na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ha nwere ike na-enyocha ego ọnụahịa. Ha nwedịrị ike ịna-akụziri onwe ha ihe dị ka ọrụ ha. N'ọnọdụ ọ bụla, esemokwu bụ ma ị na-enye azịza ha na-achọ. Dịka Marcus Sheridan na-aza n'akwụkwọ ya, Ha Jụọ,, Na-aza!
Comparison - Tinyere nyocha, onye ọbịa gị nwere ike iji ngwaahịa gị, ọrụ gị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị atụnyere onye ọzọ. Ha nwere ike na-atụnyere uru, atụmatụ, ọnụego, otu, ọnọdụ (s), wdg. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ pụtara ìhè nke ibipụta ibe ha na-atụnyere ndị na-asọmpi (na-enweghị ewere jabs) iji mee onwe ha iche. Ọ bụrụ na onye ọbịa na-eji gị atụnyere ndị asọmpi gị, ị na-eme nke ahụ ka ọ dịrị ha mfe ime?
Ndebanye aha - Ikekwe onye ọbịa bịara n’ọzọ ikpe-azụ na njem ndị ahịa ha mana ha nwere nsogbu ole na ole gbasara gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Ikekwe ha na-echegbu onwe ha banyere usoro mmejuputa oge, ma ọ bụ nkwado ndị ahịa, ma ọ bụ afọ ojuju ndị ahịa. Ọ bụrụ na onye ọbịa abịa na peeji gị, ị na-enye nkwado ọ bụla? Ndị na-egosi ntụkwasị obi bụ akụkụ dị oke mkpa - gụnyere ogo, nyocha, nlebara anya ndị ahịa, asambodo, onyinye, wdg.
Connection - Nke a nwere ike ịbụ otu n’ime ihe na-akụda mmụọ ọtụtụ websaịtị ụlọ ọrụ. Ikekwe ha bụ ndị na-eweta ngwanrọ… na enweghị bọtịnụ nbanye. Ma ọ bụ na ị bụ onye nyocha nke na-achọ ọrụ - mana enweghị akwụkwọ nlekọta. Ma ọ bụ ha bụ nnukwu ụlọ ọrụ na mbọ iji meziwanye ụzọ na arụmọrụ dị mma, ha na-ezere itinye nọmba ekwentị. Ma ọ bụ ka njọ, ha nwere otu, ha na-akwagide gị na ekwentị ndekọ ọkụ. Ma ọ bụ ụdị ntanetị ị nyefere gị enyeghị gị ihe ọ bụla banyere nzaghachi ma ọ bụ otu ị ga-esi nweta enyemaka ị chọrọ. Nke a bụ ebe nkata na-aga nke ọma. Olileanya gị ma ọ bụ onye ahịa gị chọrọ ijikọ gị… kedu ka isi sie ike ịme ya maka ha?
akakabarede - Yana njikọ, ị na - eme ka ọ dịrị onye chọrọ ịzụrụ ihe mfe? O juru m anya na ọnụ ọgụgụ nke saịtị ma ọ bụ ọdịda peeji nke rere m… ma enweghị ike ire m. M dị njikere - kaadị akwụmụgwọ n'aka - na mgbe ahụ ha tụbara m na a jọgburu ahịa okirikiri ebe m na-amanye ịgwa onye nnọchianya, ịtọọ oge a ngosi, ma ọ bụ na-ụfọdụ ndị ọzọ nzọụkwụ. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị mgbe ha nọ na saịtị gị, ha nwere ike?
Ya mere… ka ị na-arụ ọrụ iji chepụta weebụsaịtị, profaịlụ mmekọrịta, ma ọ bụ ọdịda - chere maka ebumnuche nke onye ọbịa, ebe ha si, ngwaọrụ ha na-abịarute, yana otu ị ga-esi zụọ ebumnuche ahụ Ekwenyere m na ihu akwụkwọ ọ bụla chọrọ iji ihe ise ndị a na ndị ọbịa na-ebe ahụ. Ogbe gi a ha nwere ha?
Tags: imebe peejindị mmadụgaa leta iheomume obiaebumnuche ndị ọbịaebumnuche weebụsaịtị
Atumatu Ebumnuche: Idozi Nchedo Ebube Na Oge A Kuki